NXEcoin စျေး - အွန်လိုင်း NXE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NXEcoin (NXE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NXEcoin (NXE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NXEcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NXEcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NXEcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NXEcoinNXE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0034NXEcoinNXE သို့ ယူရိုEUR€0.00287NXEcoinNXE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0026NXEcoinNXE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0031NXEcoinNXE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0308NXEcoinNXE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0214NXEcoinNXE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0751NXEcoinNXE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0126NXEcoinNXE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00451NXEcoinNXE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00473NXEcoinNXE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0767NXEcoinNXE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0263NXEcoinNXE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.018NXEcoinNXE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.255NXEcoinNXE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.57NXEcoinNXE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00466NXEcoinNXE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00511NXEcoinNXE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.105NXEcoinNXE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0236NXEcoinNXE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.359NXEcoinNXE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4.04NXEcoinNXE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.31NXEcoinNXE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.249NXEcoinNXE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0941
NXEcoinNXE သို့ BitcoinBTC0.0000003 NXEcoinNXE သို့ EthereumETH0.000009 NXEcoinNXE သို့ LitecoinLTC0.00006 NXEcoinNXE သို့ DigitalCashDASH0.00004 NXEcoinNXE သို့ MoneroXMR0.00004 NXEcoinNXE သို့ NxtNXT0.282 NXEcoinNXE သို့ Ethereum ClassicETC0.000477 NXEcoinNXE သို့ DogecoinDOGE0.972 NXEcoinNXE သို့ ZCashZEC0.00004 NXEcoinNXE သို့ BitsharesBTS0.131 NXEcoinNXE သို့ DigiByteDGB0.129 NXEcoinNXE သို့ RippleXRP0.0114 NXEcoinNXE သို့ BitcoinDarkBTCD0.00012 NXEcoinNXE သို့ PeerCoinPPC0.0118 NXEcoinNXE သို့ CraigsCoinCRAIG1.58 NXEcoinNXE သို့ BitstakeXBS0.148 NXEcoinNXE သို့ PayCoinXPY0.0606 NXEcoinNXE သို့ ProsperCoinPRC0.436 NXEcoinNXE သို့ YbCoinYBC0.000002 NXEcoinNXE သို့ DarkKushDANK1.11 NXEcoinNXE သို့ GiveCoinGIVE7.52 NXEcoinNXE သို့ KoboCoinKOBO0.767 NXEcoinNXE သို့ DarkTokenDT0.00313 NXEcoinNXE သို့ CETUS CoinCETI10.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 07:15:02 +0000.